In yar markii looga baxo biyo mareenka-Umeå geeskiisa waqooyi-bari halkaa uu biyo mareenka ugu baxa Bottenviken waxaa ku taalo Umeå. Magaalada waxeey magaalo-degan uu tahay gobolka Västerbotten, waana Norrland meesha ugu dhismo badan. Degmada dhamanteed waxaa dagan ku dhawaad 120 000 oo qof. Laakiin dadka dagan waa sii badanooyaan waa sii badanooyaan sanad kasto taasi ee keentay fursado fiican ee waxbarshada iyo kobcin xasillan oo mudo dheer socotay. Ayadoo ee magaalada lee dahay arday badan, sido kale Umeå waxeey ka mid tahay magalada dalka ugu ”yar” ayadoo da’-dhexeedka uu yahay 38 sano.
Shirkada guriyaasha ee degmadeedka AB Bostaden ayaa ugu guriyaal (la kireeysto) badan magaalada. Sido kale shirkada waxeey guriyaal la kireeysto ku lee dahay meelo kale oo degmada ku yaalo, waxaa ka mid ah Holmsund, Obbola, Ersmark iyo Sävar. Xaafadahaas ayaa inta badana ka sahlan in laga helo guriyaal maadama ee safka guriyaasha uu ka gaaban yahay. Guri kireeyala kale iyo dalaale-guriyaal waxaad ka heli kartaa liiska soo socdo ee ku qoran yhiin milkiyaasha-guriyada ee gaarka ah. In guri laga raadsata hadana laga soo safrona degmada dhaw, taasi waa dabcan mid kale oo la dooran karo.
Dhowr ururo oo diimeed iyo jinsiyadeed aya jiro laakin sido kalena ururo ka hoowl galo arimo badan. Ku sii dar dhowr urur-waxbarasho. Fiirso degmada diwaankeeda-urureed si aad uu hesho warbixinta-xariirka.
Hey’addaha ugu badan iyo adeega bulshada ee kale sidii xafiiska shaqada, xafiiska bulshada, qasnada ceeymiska, xafiiska canshuuraha iyo maktabada-magaalada Umeå waxeey ku wada yaaliin bartamaha. Waxaa ka reeban goobaha Hey’adda socdaalka oo ku yaalo xaafada Ersboda.
Marka ee ku saabsan tahay xanaanada caruurta waxaa jiro in kala duwan oo dorasho, nuucyo iyo xal ah. Kuwaan waxeey ku soo bandhigan yihiin bogga degmada ee qeeybta dugsiga xananaada iyo xanaanada caruurta.
Degmada Umeå waxeey lee dahay 49 dugsiyaal hoose oo degmada lee dahay kuwaasi oo uu kala qeeybsan meelo joqraafi ee iskuuleed iyo dhowr iskuulo oo madaxbanaan oo leh jiheeyn kala duwan. Warbixin sii faahfaahsan waxeey ku jirto hoosta qeeybta dugsiyada hoose ee booga degmada.
Maagalada waxeey lee dahay afar dugsiyaal sare ee degmada lee dahay iyo dhowr kale la dooran karo oo madaxbanaan. Sido kale waxaa jiro iskuulo si gaar ah uu jiheeysan oo leh diwaangalid-qarameed. Sido kale degmada waxeey wadashaqeeyn la lee dahay iskuulka Lija ee ku yaalo Vännäs. Intaan oo dhan markii la isku daro waxeey keeneeysaa in ardayga uu fursado badan uu lee yahay in uu doorta waxbarashada sax uu ah. Qeeybta dugsiga sare gudaha bogga degmada ayaad ka heleeysaa warbixin dheeraad ah oo sii faafaahsan.
Degmada Umeå waxaa ku yaalo isbitaalka-jaamacada ee Norrland, dhowr rug caafimaad iyo daryeelka ilkaha ee dad weeynaha. Bogga maamulka gobolka caafimaadka Västerbotten ayaa si sax ah ku hagaayo.
Fursad lagu helo turjumaan ayaa qofka loo soo bandhigaa markii uu xariir la lee yahay hey’addaha. Hey’addo badana waxeey lee yihiin warbixin badan oo ku qoran luuqado kala duwan.
Shaqo dhiibaha weeyn ee qeeybta dadweeynaha oo degmad ka jiro waa xafiiska degmada, maamulka gobolka caafimaadka iyo Jaamacada Umeå. Shirkadaha, fiirso liiska bogga ee ku qoran yihiin shaqo dhiibayaasha sii waa weeyn. Sido kale waxaa safar shaqo loogu gali karaa degmooyinka dhow sidii Vännäs, Vindeln ayadoo ee jirto isgaarsiin fiican darteed.
Butikchefstrainee Tillsvidare 100% , Umeå Butikschef
Lediga jobb på Telenors tekniska kundservice i Umeå! Kundtjänstmedarbetare
Distriktssköterska , Holmsund / Obbola Hälsocentral , Umeå Distriktssköterska
Förskollärare till Hedlunda Förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Avdelningschef till ThoraxIVA , Hjärtcentrum Umeå Enhetschef, hälso- och sjukvård
HR - konsult inom Arbetsrätt , VLL , Umeå HR-konsult/PA-konsult
Vill du ha flexibla arbetstider då har vi säljjobbet för dig i Umeå. Hemförsäljare
Biträdande restaurangchef Hovmästare
Städare / Lokalvårdare sökes omgående - Cleaning staff to Älvis Städ AB Städare/Lokalvårdare
Medicinsk sekreterare till Hälsocentralen Husum - Trehörningsjö Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Controller , Ekonomistaben Controller
Hovmästare till Artonnittiosju Hovmästare
Tekniska Projektledare Civilingenjör, konstruktion, maskin
Senior Mekare till Umeå Civilingenjör, konstruktion, maskin
Sales Engineer till Cetetherm AB Account manager
Systemutvecklare till Västerbottens museum Systemutvecklare/Programmerare
Lagermedarbetare med mekaniskt intresse Lagerarbetare
Fältsäljare / Retail Specialist till en av marknadens starkaste spelare ... Regionchef, butik
Sjuksköterska , Strokecenter Neuro - huvud - hals centrum , Umeå Sjuksköterska, grundutbildad
2 317 km2
Örnsköldsvik 110 km
Skellefteå 136 km
Sundsvall 263 km
Stockholm 639 km